Manohy ny sidina Irak, Kenya, Slovakia ary Espana i Russia, tsy maintsy miandry ny sidina Afghanistan
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Manohy ny sidina Irak, Kenya, Slovakia ary Espana i Russia, tsy maintsy miandry ny sidina Afghanistan
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Irak • Kenya Breaking News • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Vaovao Mafana Slovakia • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Manohy ny sidina mankany Iraq, Kenya, Slovakia ary Spain, Russia, ny sidina Afghanistan dia tokony hiandry
Araka ny loharanom-baovao sasany avy amin'ny governemanta rosiana, ny fanapahan-kevitra momba ny fanomanana sidina sivily mahazatra miaraka amin'i Kabul sy ny fanomezana slot ho azy ireo amin'ny fandaharam-potoanan'ny kaompaniam-pitaterana rosiana dia mbola tsy noraisina. Mbola aloha loatra ny miresaka momba ny fanombohana ny sidina sivily any tsy tapaka.
Rosia hanohy ny serivisy amin'ny serivisy miaraka amin'ny firenena efatra hafa.
Ny sidina avy any Moskoa mankany Kenya, Slovakia, Irak ary Espana dia manomboka indray.
Tsy mbola misy sidina avy any Rosia mankany Afghanistan.
Niresaka ny foiben'ny krizy fanoherana ny COVID nasionaly, nanambara ny governemanta Russia androany fa hanangana serivisy fitaterana an'habakabaka mahazatra miaraka amin'i Irak, Kenya, Slovakia ary Espana ny Federasiona Rosiana manomboka amin'ny 21 septambra 2021.
“Manohy ny serivisy amin'ny rivotra miaraka amin'i Espana, Irak, Kenya, ary Slowakia manomboka ny 21 septambra i Russia”, hoy ny nosoratan'ireo tompon'andraikitra tamin'ny governemanta Federasiona Rosiana telegrama fantsona.
Ny sidina mankany Egypta sy Torkia avy amin'ny tanàna rosiana efatra hafa - Pskov, Magadan, Murmansk, ary Chita, dia haverina manomboka amin'ny 21 septambra koa.
Mandritra izany fotoana izany, naneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo hamerina amin'ny laoniny ny dia an'habakabaka mahazatra miaraka amin'i Afghanistan ny manampahefana rosiana.
Raha ny loharanom-baovao sasany avy amin'ny governemanta Rosiana, ny fanapahan-kevitra momba ny fanomanana sidina sivily mahazatra miaraka Kabul ary ny fanomezana slot ho azy ireo amin'ny fandaharam-potoanan'ny mpitatitra fiaramanidina rosiana dia mbola tsy vita. Mbola aloha loatra ny miresaka momba ny fanombohana ny sidina sivily any tsy tapaka.
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana mahazatra amin'i Kabul, dia ilaina ny fanapahan-kevitra mety amin'ny birao foibe hisorohana ny fanafarana sy ny fihanaky ny aretina COVID-19.
Ny fotodrafitrasa rehetra ilaina amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy maintsy foronina ao Kabul aloha mba hiantohana ny asan'ny mpanara-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra mifanaraka amin'ny fenitry ny fiarovana ny sidina sivily.
Notaterina teo aloha fa nanambara ny fanirian'izy ireo hanohy ny fifamoivoizana an'habakabaka amin'i Russia sy Turkey ny manampahefana Taliban.